हाम्रो सहयोगमा ओलीले जितेको हेक्का रहोस् « Jana Aastha News Online
हाम्रो सहयोगमा ओलीले जितेको हेक्का रहोस्
प्रकाशित मिति : ११ बैशाख २०७९, आईतवार २०:३०
– राजेन्द्र लिङ्देन, अध्यक्ष राप्रपा
आदिवासी समुदायका भएर पनि जातीय आरक्षणको विरोधी नेताका रूपमा चिनिन्छन् राजेन्द्र लिङदेन, जसले ०७४ को निर्वाचनमा देशैभर नील हुँदा राप्रपाको साख जोगाउन सफल भएका थिए । यसअघि दुई कार्यकाल महामन्त्री चलाइसकेका लिङ्देन शालीन र शिष्ट नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तत्कालीन अध्यक्षत्रय पशुपतिसमशेर राणा र प्रकाशचन्द्र लोहनीसहितबाट पार्टी चल्दैन भन्ने एजेण्डाका साथ कमल थापाविरुद्ध मैदानमा होमिएका उनी ०७८ मंसिरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट राप्रपाको अध्यक्ष चुनिएका हुन् । लिङ्देनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले जिल्ला विकास समिति झापाको सभापतिमा मनोनयन गरेका थिए । ताप्लेजुङमा जन्मिएर, झापामा हुर्किएका र पहिलो संविधानसभा सदस्यसमेत रहिसकेका लिङ्देनले ०७४ मा कांग्रेसका हेभिवेट नेता कृष्ण सिटौलालाई हराएका थिए । उनैको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भएर सोमबार मात्र पूर्वसचिव केदार अधिकारी राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव हुने मिति नजिकिएको छ । दलहरू गठबन्धनसहित चुनावमा होमिँदै छन् । राप्रपालाई गठबन्धनप्रति अरुचि किन ?
– हामीले ३०÷३२ वर्षको लिगेसी बोकेका पार्टीहरूको विकल्पको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेका छौँ । एक्लै चुनावी मैदानमा जाने र आफ्नो पक्षमा कस्तो जनमत छ ? बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका बाबजुद पनि कतिपय स्थानीय तहमा सामान्य तालमेल हुन सक्ने स्थिति छ ।
तपाईंहरूको कुरा पाँचदलीय गठबन्धनसँग करिब करिब मिल्छ । तर, तालमेल किन हुन सकेको छैन ?
– के कुरामा एजेण्डा मिल्छ र राप्रपाको ? पाँचदलीय गठबन्धन पनि यथास्थितिकै प्रतिनिधि हो । हामी त यथास्थितिको अन्त्य गरेर देशलाई नयाँ ढंग र नयाँ सम्झौताबाट अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने धारको नेतृत्व गरिरहेका छौं ।
तपाईंकै गृहजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र झापामा केन्द्रको गठबन्धनभन्दा विपरीत एमाले र कांग्रेस मिलेर राप्रपासँग भिड्ने भन्दै छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– कांग्रेस, माओवादी र एमाले भनेका अलग पार्टी होइनन् । एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । देशलाई बर्बादीको यो बिन्दुमा पुर्याउनका लागि यी दल समान जिम्मेवार छन् भन्ने पुष्टि हुँदै छ । यसमा म खुशी व्यक्त गर्छु ।
त्यहाँ राप्रपाको अवस्था कस्तो होला ?
– राप्रपाले विगतको भन्दा राम्रो गर्छ । हामीले जितेका स्थानीय तहमा अरुले भन्दा फरक काम गरेर देखाएका छौँ । स्थानीय जनता जसले कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई विजयी गराए, राप्रपालाई मत नदिएर गल्ती भएछ भन्न थालेका छन् ।
राप्रपाले जितेका ठाउँमा जनताका छोराछोरीले १२ कक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने, बिर्तामोड शहरमा भन्दा ३० प्रतिशत सस्तोमा औषधि पाइने, हरेक वडामा कालोपत्रे सडक पुग्ने, पूर्वाधारदेखि अन्य दृष्टिकोणले अगाडि हुने स्थिति छ ।
तर, हामी मात्र किन पछाडि ? कांग्रेस, एमालेलाई जिताउने गाउँपालिका वा नगरपालिकाका जनताले किन छोराछोरीलाई शुल्क तिरेर पढाउनुपर्ने भन्ने प्रश्न अहिले उठाइरहेका छन् ।
ठूला दलहरू नै गठबन्धनसहित निर्वाचनमा होमिएका छन् । राप्रपा भने एक्लै भन्दैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईंहरूको पोजिसन कस्तो होला ?
– ७५३ स्थानीय तहमध्ये राप्रपाले धेरै सिट जित्छ । अरूभन्दा पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने गफ लगाउँदैनौँ । पहिलाको मतभन्दा धेरैले जित्छौं । यो निर्वाचनको तयारीका लागि धेरै समय पाएनौँ । जति समय पाएका छौं, राम्रो तयारी गरिरहेका छौं-गर्छौ।
चुनावी प्रचार प्रसारका लागि तपार्इं देश दौडाहामा हुनुहुन्छ । अध्यक्ष एक्लै दौडनुपर्नेचाहिँ किन ?
– अरू साथी पनि डुलिरहनुभएको छ । मुख्य नेतृत्वको हिसाबले अध्यक्ष कार्यक्रममा आइदिओस् भन्ने चाहना कार्यकर्ता र आमजनतामा हुनु स्वाभाविक हो ।
कमल थापाले पार्टी फुटाएपछि कतिपय राम्रै मान्छे पनि उता गएका छन् । यसले राप्रपालाई कति क्षति पु¥याउँछ ?
– राम्रा वा नराम्रो भन्ने मापदण्ड के हो ? आफूसँग नबसेर अरूको पार्टीमा लागेको मान्छेलाई नराम्रो-खत्तम भन्न पनि भएन । त्यसले बरु सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । राप्रपा शुद्दीकरणमा सहयोग पुगेको छ ।
राजनीतिलाई पेशा वा व्यवसाय मान्ने मान्छेहरू अहिलेकै प्रणालीलाई ठीक छ भन्छन्, यथास्थितिमा रमाउन खोज्ने मान्छेहरू एकातर्फ, परिवर्तन र विकास चाहनेहरू अर्कातर्फ छन् । हामीभित्रबाट राजनीतिलाई पेशा, व्यवसाय ठान्नेहरू निस्किएर जानुभयो । निस्केर समयमै हामीलाई मद्दत गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन्छु ।
कमल थापा एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा होमिँदै छन् । कस्तो लागिरहेको छ ?
– उहाँ एमालेमा जाने सिलसिलाको यो पहिलो पाइला हो ।
कमल थापाले एमाले रोजेपछि मूलधारको राप्रपाचाहिँ सानो हुने त होइन ?
– केही फरक पर्दैन । केपी ओली, कमल थापा र एकनाथ ढकाल मात्र होइन– शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालहरू पनि समीकरण वा गठबन्धन बनाइरहेका छन् । त्यो गठबन्धनले राप्रपाको यात्रामा केही फरक पर्दैन ।
आगामी संसदीय चुनावमा केपी ओलीकै क्षेत्रबाट उठ्ने चर्चा छ । कति सत्य हो ?
– अहिले त्यसप्रकारको कुनै कल्पना गरेको छैन । सम्भावना त रहिरहन्छ । त्यसबेलाको परिस्थिति के हुन्छ ? कसैप्रति मेरो इगो छैन । तर, परिस्थिति आइलागे जसको पनि सामना गर्न तयार छु । भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । संसदीय निर्वाचन आउँदै छ ।
१८ चैतमा केपी शर्मा ओली र महामन्त्री धवलसमशेर राणासँग नेपालगञ्जको भेटमा तपार्इंमाथि हिलो छ्याप्नुभएको रहेछ हैन ?
– केपी ओलीमा गएको संसदीय निर्वाचनमा मिलेर उठेका थियौं, त्यही कारण राजेन्द्र लिङ्देन हाम्रो कारण जितेको मान्छे हो । ऊ हाम्रो सल्लाह वा निर्देशनबमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने सोच थियो होला तर म एउटा पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले जे कुरामा राप्रपाको हित हुन्छ, त्यहीअनुसार गर्छु । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कसैको भाइ पार्टी होइन । राप्रपा वैचारिक हिसाबले यो मुलुकको वैकल्पिक पार्टी हो ।
कतिपय कुरामा केपी ओलीले सोचेजस्तो भएन होला तर उहाँलाई के थाहा हुन जरुरी छ भने राजेन्द्र लिङ्देनले एमालेको सपोर्टमा जितेको कुरा त सत्य हो । त्यसलाई मैले तलमाथि गर्न मिल्दैन तर राजेन्द्र लिङ्देनको समर्थनमा केपी ओलीलगायत तत्कालीन वामपन्थी गठबन्धनका चारवटा प्रतिनिधिसभा सदस्य र दश जना प्रदेशसभा सदस्यले चुनाव जितेको कुरा पनि बिर्सन हुँदैन । दर्जनौं निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो सहयोगमा जित्नुभएको कुराको हेक्का उहाँहरूलाई कहिल्यै भएन । उहाँका कार्यकर्ताले पनि कहिलेकाहीँ ‘हेरौँला’ भनेर लेखेको देख्छु ।
चुनावी तालमेलका लागि ओलीबाट तपाईंलाई सीधै केही प्रस्ताव आएको छैन ?
– छैन ।
तपाईं नेतृत्वमा पुग्नुअघि र अहिलेको राप्रपामा के फरक पाउनुभएको छ ?
– हिजोको राप्रपा सत्तासाझेदार पार्टी बन्नेमा केन्द्रित थियो भने अहिले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्न सक्ने गरी पहिलो वा अग्रणी पार्टी बन्ने दिशातिर केन्द्रित छ । जनताले राजनीतिप्रति असाध्य निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । हामी नेतृत्वमा आएपछि आमजनताले खोजेको पार्टी वा नेता यही हो कि भन्ने आशाको नजरले हेरिरहेको पाएको छु ।
राप्रपाले जनताले अस्वीकार गरिसकेको हिन्दूराज्य र राजसंस्थाको एजेण्डा बोकेर हिँड्छ कि छाड्छ ?
– राप्रपाको आत्मा भनेकै संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म सहभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र हो । यो छाड्न सकिने विषय नै होइन । मिल्ने भए आजै राजालाई ल्याएर राखिदिन्थ्यौं, देशलाई हिन्दूराष्ट्र बनाइदिन्थ्यौं । यसलाई छोड्ने वा पुनर्विचार गर्ने विषय नै छैन । यी दुई चिज नेपालजस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको मुलुकका लागि स्थायित्वका आधार हुन् ।
अहिलेको सरकारको कामगराइलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो सरकार छ वा छैनको अनुभूति नै छैन । गतिविधि नै शून्य छ ।
जहाज हराएपछि बोर्डिङ पास लिएकाहरु कुरेको कुर्यै
निजगढ विमानस्थलमाथि अदालतको अँकुशवारे सिंहदरबारमा गर्मागर्मी छलफल
दार्चुलमा पनि राजनीति गर्ने शिक्षकलाई ७ दिनको अल्टिमेटम
चुनाव हारेको झोकमा एमाले नेताले कार्यकर्तालाई समेत पार्टी छोडाए
हराएको जहाजमा भारतीय र जर्मनी नागरिकसहित १३ नेपाली
सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा लालबहादुर ‘कन्टिन्यु’
खेलाडीलाई रुवाएर लाखौंको यार्सागुम्बा खरिद
हराएको जहाज लेतेमा ठोक्किएको आशंका, अर्को हेलिकप्टर त्यतै उड्यो
बेपत्ता तारा एअरको जहाजमा को को सवार थिए ?